Cumar Jaamac Warsame
"....Dad ay darawalka qaraabo yihiin oo ila soo xariiray waxaa ay ii sheegeen in si aan laga sheekayn karin loo silicdilyeeyey taksiilahaas...." Shaafici
Waxaa bilahaan socotey fadeexad weyn oo ka dhacday magaalada Hargeysa, taas oo weli socota. Waxaa ay dad badani u arkaan in ay dhibaatada Samsam Axmed Ducaale iyo wiilkii taksiga ku wadey tahay arrintii ugu foosha xumayd taariikhda soomaalida. Dhan kasta oo laga eego waxaa ay qisadaani noqotay fajaciso, waxaana u qaadan waayey soomaali iyo ajnebi intii ay qisadaan ilmaha saqiirka ah ku saabsani gaartey.
Soomaali badan oo badan ayaa wax ka qortay fadeexaddaan, laakiin waxaa sida badan lagu mashquulay Samsam keli ah ee darawalkii taksiga aad loogama hadlin. Dad ay darawalka qaraabo yihiin oo ila soo xariiray waxaa ay ii sheegeen in si aan laga sheekayn karin loo silicdilyeeyey taksiilahaas.
Haddaba waxaa aan go’aansaday in aan qisadaan ka qoro buug weyn oo ay mustaqbalka dhow iyo midka dheerba ummadda soomaaliyeed akhriyaan, oo ay siiba ardada dhallinta yari ka dhigtaan sheeko xasuus badan, isla markaas filim ahaan loo jilo.
Waxaa sheekada oo aan weli soo baxin in aan sheego igu kallifay baahi aan u qabo in ay ummadda soomaaliyeed iga caawiyaan arrimo aanan qoraalka sheekada uga maarmayn. Waxaa ugu weyn arrimahaas in la iiga warramo sida ay u eg yihiin guriga madaxweynekuxigeenka Hargeysa oo uu malaha kufsigii ugu horreeyey ka dhacay iyo saldhigyada gabadha iyo wiilka lagu jirdiley oo weliba Samsam lagu kufsaday iyo aagga ay kaga yaalliin magaaladaas. Waxaa kale oo aan u baahnahay guud ahaan xaafadaha magaalada iyo agaar ahaan meelaha ay kala deggan yihiin nimanka madaxda ah oo fadeexoobey.
Sheekada magaceedu sir ma uu aha oo waxaa la yiraahdaa ”Labo dhagax dhexdood”, waxaa aanna ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan intooda igu caawin karta sharraxaadda magaaladaas ay fadeexaddu ka dhacday ka codsanayaa in ay e-mailo iigu soo diraan sharraxaaddaas iyo in aan la iga illaawin cimilada magaaladu sida ay tahay xilligaan ay socoto dhibaatadaas naxdinta lehi.
Wax kasta oo sharraxaad ah waa aan u baahnahaay, isla markaas qof kasta oo iga caawiya qoritaanka ”Labo dhagax dhexdood” waxaa uu heli doonaa mahadin aad u weyn.